Kani waa daruurta duufaanka ee ka dhigaysa reer Arjantiin iyo adduunkaba jacayl | Saadaasha Shabakadda
Tani waa daruuraha duufaanka ee ka dhigaya Argentine iyo adduunka jacayl
Sawir - Agustín Martínez
Quruxsan, sax? Daruuraha duufaanku waa cajiib. Waxay qiyaasi karaan ilaa 20km dherer ahaan, sidaas marar dhif ah ayaa lagu arki karaa haybadooda oo dhan halkan ka soo bilow, dhulka. Laakiin taasi waa sida saxda ah wixii ay awoodaan inay ka qabtaan Gobolka Neuquén, Argentina, Nofeembar 30.
Halkaas, Cumulonimbus aan caadi aheyn ayaa la sameeyay, kuwaas oo ah daruuraha soo gudbiya duufaanka iyo roobka, oo u adeegaya dhiirrigelinta sawir qaadayaasha xirfadlayaasha ah iyo kuwa la hagaajiyay.
Caadi ahaan, marka Cumulonimbus uu ka sameysmo gobolka badiyaa waa war xun, maaddaama halkaas ay roobabku inta badan sababaan dhibaatooyin badan, sida waddooyinka daadadka ah, daad-gureynta, ama dhul-go'idda; Si kastaba ha noqotee, Arbacadii la soo dhaafay dadka Neuquén waxay eegeen cirka iyagoo la yaaban quruxda daruuraha xiisaha leh.
Waxay ka sawireen marxaladihiisa kala geddisan, iyo deegaanno kala duwan: dhismayaasha, laga soo bilaabo Río Negro, ... xitaa waxaa jiray xitaa kuwa goobta ka shaqeeyay, sida Andrés Killy, oo idaacadda Facebook ka sii daayay waqti aad u qurux badan oo aad arki karto isagoo sameynaya halkan guji.
Sidee loo sameeyaa Cumulonimbus?
Cumulonimbus waa daruuraha horumarka toosan ee weyn, taas oo waxaa sameeya khaanad hawo diirran oo qoyan oo ku kororta wareegga wareegga. Saldhigga ayaa ka hooseeya 2km, laakiin kore wuxuu gaaraa 15-20km. Caadi ahaan waxay soo saaraan roobab iyo onkod, gaar ahaan marka la horumariyo, oo ah marka ay qaataan qaab anvil ah oo caarada gadaasheeda. Waxay ku samaysan kartaa gooni-gooni ama kooxo, ama wejiga hore ee qabow.
Waxay kuxirantahay halka ay ka sameysmaan iyo roobka xoogooda, waxay sababi karaan dhibaatooyin badan ama ka yar. Tusaale ahaan, Haddii uu si xoog leh uga da'o aag dadku ku badan yahay, wuxuu sababi doonaa daadad iyo / ama dhul go '. Sidoo kale, haddii xaaladaha saxda ah la buuxiyo, waxay sababi karaan duufaanno iyo duufaanno.
Maxaad u maleysay sawirka Argentina Cumulonimbus? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Tani waa daruuraha duufaanka ee ka dhigaya Argentine iyo adduunka jacayl
Shimbiraha badda ayaa gacan ka geysta gaabiska kululaynta Arctic
Heerkulka celceliska adduunka ayaa kor u kacay 1,31 darajo